Ucabanga ukuthi isitoreji se-Flash siyinto ebiza kakhulu? Think Again - NAB Bonisa Izindaba nge-Broadcast Beat, Umsakazo Osemthethweni we-NAB Show - NAB Bonisa LIVE
Ikhaya » Ukudalwa kokuqukethwe » Ucabanga ukuthi isitoreji se-Flash siyinto ebiza kakhulu? Cabanga futhi
Ucabanga ukuthi isitoreji se-Flash siyinto ebiza kakhulu? Cabanga futhi
UJason Coari, uMqondisi Omhlaba jikelele, uMkhiqizo noMsombululo Wokukhangisa I-Quantum
Wonke umuntu uyavuma ukuthi leyo flash ingaletha ukusebenza okuvelele. Futhi ngezinqubo ezithile kanye nemisebenzi yokusebenza, leyo ndlela yokusebenza ibalulekile ngokusobala. Isibonelo, lapho abahleli basebenza ngemifudlana eminingi ye-4K engaxhunyiwe (noma ngokuphindaphindiwe, ividiyo ye-8K), i-flash inganikeza uhlobo oluthile lokuhlangenwe nakho okudingekayo ukuze kutholakale okuqukethwe okunamandla kakhulu.
Kodwa-ke, kunenkolelo enkulu embonini yezokuxhumana nezokuzijabulisa ukuthi ukukhanya kobuchwepheshe bubiza kakhulu. Nini I-Quantum abacwaningi bevidiyo abacwaningwe - kusukela ezindlini zokukhiqiza emva kokukhiqiza, izinhlangano zokusakaza, ama-ejensi okudala, ama-studios kanye namafemu okudilizwa kokuqukethwe kuwo wonke iNyakatho Melika, eYurophu nase-Asia - abangaphezu kwesigamu sabasolwa baphakamise izindleko njengenhloko yokuqala yokuthumela izixazululo ezisuka ku-flash.
Lokhu kuyiqiniso eliyingxenye nje, futhi okusho nje ukuthi utshele isigamu indaba. Izindleko zesisombululo se-flash-storage zonke zizobonakala zibiza kakhulu uma ukuhlaziywa kubheka kuphela amaphuzu amanani okufanisa nomthamo ($ / TB) wezixazululo ze-HDD-based vs. SSD based based solutions. Kodwa-ke, lapho izindleko zobunikazi (TCO) zenziwa, ngaphandle kokubhekisela kokusebenza komsebenzi, ukonga kwe-flash storage, kanye nokugcinwa kwe-flash memory (NVMe), okuphoqelelwe kakhulu, akunamandla.
Izinto zokuqala kuqala - Iyini i-NVMe?
Kuze kufike ukufakwa kwe-NVMe, isitoreji esisekelwe kalula-njengama-driver-state drives (SSDs) - ukusetshenziswa kobuchwepheshe be-SATA noma i-SAS ukuxhuma isitoreji nazo zonke ezinye izinhlelo zekhompyutha. Kodwa i-SATA ne-SAS ekuqaleni yakhelwe ukwesekela ama-disk ama-hard disk (ama-HDD), futhi njengoba abakhiqizi bezakhela ukushayela okusheshayo okusheshayo, lokhu kubuchwepheshe obudala kunciphisa ukusebenza kwama-SSD.
I-NVMe yenzelwe ngokukhethekile isitoreji esisekelwe ku-flash. Nge-NVMe, umgqa ngamunye we-CPU uxhumana ngokuqondile nesitoreji usebenzisa ibhasi le-PCI ephakeme kakhulu esikhundleni se-SATA esheshayo noma i-SAS interface. Ukusebenzisa i-PCI, ama-flash based based drives enza nge-memory nge-memory esikhundleni se-HDD yendabuko. I-NVMe ifeza ukusebenza okuphezulu ngengxenye ngokusekela imiyalo eminingi emgqeni, kanye nezindlela zokuxhumana, kunezinhlelo ze-SATA noma ze-SAS. I-SATA ne-SAS ngayinye ibe nemigqa yomyalo oyedwa, engakwazi ukubhekana nemilayezo ye-32 ne-254, ngokulandelana. Ngokuphambene, i-NVMe ingase isekele cishe emigqeni ye-65,000 nemiyalo ye-65,000 ngomugqa owodwa.
Uma kuqhathaniswa ne-SATA ne-SAS, i-NVMe yenza izicelo ezifundwa ngokuphindaphindiwe ngokushesha. I-NVM ingakwazi ukusingatha cishe izigidi ezingu-1 ezifundwa ngokungahleliwe ngomzuzwana, uma kuqhathaniswa ne-SATA cishe cishe kwe-50,000 ne-SAS cishe ku-200,000 okungahleliwe okufundwa ngomzuzwana. Futhi, ngisho nawo wonke lawo afundwayo, i-NVMe igcina i-latency ngaphansi kwezingxenyana ze-20, uma kuqhathaniswa nama-microsecond we-500 we-SATA no-SAS. Kulabo
besebenzisa isitoreji ukusekela amaklayenti amaningi adinga imifudlana yedatha efana, ama-SSD aphezulu kakhulu kuma-HDD.
I-NVMe nayo inganikeza ukudluliswa okungavamile kunethiwekhi. Ukuhlolwa kwangaphakathi ngu I-Quantum, I-NVMe isitoreji sitholiwe ukuletha okungaphezu kwama-10 izikhathi zokufunda nokubhala ukusebenza kwe-passput ngeklayenti elilodwa uma kuqhathaniswa namakhasimende axhunyiwe we-NFS ne-SMB.
I-NVMe ubuchwepheshe be-flash evumela ukuthi abasebenzisi bangavuli kuphela amandla angempela we-flash, kodwa ukwenza kanjalo ngenkathi kunciphisa i-TCO. Izinzuzo zeminye imiyalo emgqeni, ukufundwa okusheshayo, i-latency ephansi kanye ne-outputput ehlukile ukuhlanganisa futhi unike amandla i-NVMe ukuletha izindleko eziphoqelelayo kanye nenzuzo.
Esikhathini esedlule, ukusebenzisa i-flash yesitoreji esivumelwaneni kwakudingeka kancane ukuvimbela ngoba izinhlangano zisetshenziselwa ukuxhumana okuphezulu kwe-Fiber Channel. Ukuxhumeka kwenethiwekhi ngokuvamile kuyinkokhelo yesibili enkulu kunazo zonke emva kokugcinwa kwezindaba, futhi ukuxhumana kwe-Fiber Channel kungaba kubiza kathathu kuya kwezine kune-Ethernet.
Nge-NVMe, izinhlangano zingathola ukusebenza okufana ne-Fiber Channel usebenzisa ubuchwepheshe obukhulu obukhulu be-Ethernet. Ubuchwepheshe be-Ethernet buvumela abasebenzisi ukuthi balondoloze imali hhayi kuphela kwimishini kodwa nakumphathi, ngoba ukuphathwa kwe-Ethernet akudingi amakhono akhethekile wokuphathwa kwe-Fiber Channel. Kuye ngobukhulu benhlangano, kunethuba lokusindisa amashumi ezinkulungwane - noma ngisho namakhulu ezinkulungwane - ama-dollar ekuxhumaneni ngokusebenzisa i-Ethernet.
Lezo zigcinwa zodwa zivame ukwehlisa ukutshalwa kwezimali ku-NVMe isitoreji.
Uma ucabangela i-NVMe, akudingeki ukuba konke noma lutho
Lapho abantu bacabanga nge-NVMe, bavame ukuyibheka njengomnyama nomhlophe - wonke ama-NVMe noma lutho. Kodwa kunendawo enkulu ejulile okufanele ihlolwe. I-injini eqhuba noma yikuphi ispredishithi ye-hardware ethuthukile ekuthuthukiseni kwayo ngokuphelele isofthiwe. Ukusebenzisa isitoreji se-NVM ngesistimu yesimanje yesistimu kanye nesikhulumi sokuphatha idatha kunganikeza imvelo yokugcina isitoreji ngegama elilodwa lomhlaba jikelele. Izinhlangano zingathenga kuphela inani le-NVMe yokugcina elisebenzayo emisebenzini ethile ngenkathi isebenzisa ezinye izinketho zokulondoloza - kufaka phakathi amashayimu asekelwe ku-disk, amathebhulali we-tape, nesitoreji sefu - imisebenzi engadingi izinga elifanayo lokusebenza. Lekhono lokudala indawo yokugcina ye-hybride ivumela izinhlangano ukuthi zinciphise ukuthengwa kwazo kwesitoreji esisezingeni eliphansi kakhulu, ngenkathi zijabulela zonke izinzuzo zazo.
Yenza okusebenzayo, hhayi ukusebenza
Njengoba i-4K manje ejwayelekile futhi i-8K ishesha ibe yindlela evamile, umbono omncane nokuhlela namuhla kuzovuna imali enkulu esikhathini esizayo. Izakhizinda zokugcina isitoreji esivela ku-Flash zinikeza ikhono lokusekela amafomethi we-4K namuhla, kanye nalawo okuzayo okufaka phakathi
I-8K nangaphezulu. Izinhlangano ezihambisa ubuchwepheshe obusekelwe flash-flash ukusekela izakhiwo zabo zokugcina izakhiwo zizobe zihlelwe kahle ukusebenza ne-NVMe yamanje. Futhi njengoba impilo yenkonzo yalezi zinhlelo ilandiswa, izindleko zokunciphisa izindleko ziyokwehlisa - okwenza ukutshala imali kuqhubeke kakhulu.
Kuzinhlangano ezibekwe eceleni noma zivimbela ukutshalwa kwezimali kwe-flash nokuthunyelwa ngenxa yezindleko eziphezulu ezibonakalayo zesitoreji esisekelwe flash, ngizofaka imibuzo elandelayo:
· Ingabe ukuhlaziya izindleko kuthatha izindleko zendawo yedatha, izindleko zokusebenza, izindleko zokunciphisa izindleko, nezindleko zokuxhumana uma kuqhathaniswa nesistimu ye-HDD?
· Iyini intengo ekhokhelwa ukusebenza ngeteklayenti, hhayi amandla?
Ukuhlola le mibuzo ngokujulile kungaholela ekutholeni ukuthi ukuthumela i-NVMe yimpendulo - hhayi naphezu kwezindleko, kodwa ngenxa yalokho. Ngezinye izikhathi iqiniso liyilo ngempela imininingwane.
Mayelana noJason Coari
UJason Coari, uMqondisi Omhlaba jikelele, uMkhiqizo noMsombululo Wokukhangisa I-Quantum, ungumuntu omdala embonini yekhampasi yezobuchwepheshe, oneminyaka engaphezulu kwe-20 yokuhlangenwe nakho ekukhundleni okuthengisa okuphezulu nakwezokukhangisa kulabo abathengisayo bezobuchwepheshe. UJason uhola umkhiqizo wenkampani kanye nesu lokuhweba ukugcina isitoreji esikalini kuzo zonke izimboni. Ngaphambilini, wasebenza ezinhlotsheni ezihlukahlukene zomhlaba ku-SGI, ikakhulukazi eqondisa isu lokukhangisa komkhiqizo we-HPC futhi ehola izinhlangano zezokukhangisa zaseYurophu nase-APAC.
Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor I-SoftAtHome, i-MStar, i-CES2017 Ama-spears nama-Arrows Umlingisi wevidiyo	2019-06-10
Ngaphambilini: I-Lucky Finn Productions isebenzisa ama-Indipro Amathuluzi okuPhatha amadokhumenti
Olandelayo: I-ATSC 3.0: Ukuguquka Kwezinguquko Ekusebenzeni